Gebze- Halkalı Khadka rakaabka ee lagu dhameystirayo 2018 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGebze- Halkalı xawaaraha gawaarida ee lagu buuxiyo 2018
Gebze- Halkalı xawaaraha gawaarida ee lagu buuxiyo 2018
13 / 04 / 2017 34 Istanbul, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
Gebze- Halkalı Xuduuda xaafadaha waxaa lagu dhammeeyaa 2018: Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Gaadiidka iyo Isgaadhsiinta Ahmet Arslan, ayuu hadalkiisa ku daray KOTO, "Mar labaad Gebze ee Istanbul. HalkalıWaxaan dhameyn doonaa xariijimaha xaafadaha magaalada 2018. "
Wasiirka Gaadiidka, Gawaarida iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa u yimid Kocaeli si ay uga qayb galaan barnaamijyo taxane ah ka hor inta aan afti loo qaadin. Joogitaanka ugu horeeya ee Wasiirka Aruura wuxuu ahaa Dhismaha Ozka Tire iyo Kombiyuutarka oo ku yaal Basiskele, Beeraha Beeraha. Arslan, oo qado la leh shaqaalaha, ayaa u yimid Rugta Ganacsiga ee Kocaeli oo la kulmay sahayda iyo gaadiidka Kocaeli. Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), Guddoomiyaha Guddiga Wadajirka ah ee Golaha Wakiilada Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). OK, Madaxa Rugta Busmen iyo Minibuses Mustafa Kurt iyo marti sharaf badan ayaa ka soo qayb galay.
BANLIYAR SHAQO SHAQO
Hadalka furitaanka ee barnaamijka waxaa sameeyey Gudoomiyaha KOTO Necmi Bulut. Hadalka, Bulut wuxuu yiri: magaalooyinka leh tartan aad u sarreeya waxay ku wadaan dhaqaalaha aduunka halkii ay ka noqon lahaayeen wadamada. Dhibaatooyinka xubnahayaga Cengiz Topel Havaali waxay u baahan tahay in la helo. Xaqiijinta hawlgalka Gebze Adapazarı Khadka xaafadda ayaa sidoo kale dardar galin doona taraafikada iyo hawlgalka. Waxaa jira kun gaadiidka 350 oo diiwaansan. Sababtoo ah korodhka, hawada wasakheynta hawada ayaa sidoo kale khibrad leh, sidaas darteed waa muhiim in la dhiso wadooyinka. "
Duqa magaalada Kocaeli Ibraahim Karaosmanoglu ayaa ku sheegay hadalkiisa: astii Kocaeli waa magaalo wax soo saarka iyo gaadiidka, magaalada dekedda leh. Sidoo kale waa magaalo looyahay. Waxaan leenahay dhibaatooyin aad u muhiim ah oo tan ku saabsan. Waxaan nahay Metropolitan shaqadeena. Waxaan leenahay qorsheyaal dekadaha iyo isku xirnaanta, laakiin sidoo kale waxaan haynaa caqabado si loo fuliyo. Dhulka Kocaeli waa mid aad u qiimo badan, waxaan leenahay dhibaatooyin ah in la sameeyo gawaarida, gawaarida gawaarida, meelaha baabuurta la dhigto, laakiin waa inaan sameynaa. Wax kale ma hayno. Waxaan ku dhiiri galinaynaa maalgashadeena inay maalgashadaan.
WAXAAN KA QAATO KA QAABILSO
Dabadeedna magaca podium ayaa ahaa Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta. Arslan ayaa ka hadlay ka qaybgalayaasha eraygan soo socda: sida Wasaaradda, waxaannu ka warqabnaa Kocaeli waxaanan leenahay iskaashin aad u wanaagsan Metropolitan. Marka ay timaado gaadiidka iyo sahayda, haddii aad tiraahdid tan muhiim u ah waddanka, nidaamka gaadiidka sidoo kale wuxuu muhiim u yahay waddanka. Waa in la xoojiyaa in gaadiidka iyo sahayda ay aad muhiim u yihiin. Goobta xudduudaha aysan ka jirin dhaqaalaha aduunka ee caalamiga ah, gaadiidka iyo sahayda ayaa ah mid aan macquul ahayn xiriirka caalamiga ah. Waan ognahay taas.
14 320 MILLION SANO SANO
Sannadkii ugu dambeeyay 14, waxaan kaliya waxaan siineynaa XIDIMO Milyan Liras Turkiga ah ee gaadiidka badda, waxaanu siinaa boqolkiiba 320 ee wadooyinka kala qaybsan. 80 waxay samaysay tunnel 14 km sanado badan. Qadarka tunnel ee aan dhammeyn doono sannadkan waa 350 km. Waxaan dooneynaa in aan xaqiijino in gaari laga soo galo galbeedka waddanka iyada oo loo marayo wadooyinka kala qaybsan ee ku yaal Kocaeli oo ka baxaya bari. Ilaa iyo inta aan u adeegno iyo salaadda dadkeena, waxaan sii wadi doonnaa midnimo iyo wadajir. Haddii shirkadaha warshadaha ee dalkan ay sii ballaariyaan ganacsigooda, ayagoo siinaya shaqooyin badan, waxaananu sameyneynaa dhinacaan, waxaanu noqon doonaa kuwo daneeyayaasha ah oo ka shaqeeya keega.
WAXYAABAHA LAGU DHACAY ISTANBUL
Waxaan sii wadi doonnaa nashaadkeena si aan u gaarsiinno deriskeena oo dhan iyada oo loo marayo wadooyinka waawayn ee Kocaeli. Gaar ahaan Kocaeli iyo Istanbul oo ay jiraan ciriiri. Arrintan gudaheeda, waxaan aasaasnay ​​aasaaskii Bridge ee 1915 Caanakkale. Waxaan samaynay shaqooyin muhiim ah oo ku dhex yaal waddooyinka tareenada. Waxaanu hadda ka shaqeynaynaa madaarka 6, oo ah kan ugu weyn ee ku yaala Istanbul. Garoonka diyaaradku waa shaqo muhiim ah oo nagu leh inaan gaarno adduunka oo idil. Shaqadan waxaan u qabannaa dhammaan muwaadiniinteena.
400 WAXAA LAHAYD QIIMEYN
Waxaan leenahay iskaashi aad u fiican annaga oo Duqa Magaalada caasimadda ee Kocaeli. Waxaan dhiseynaa ciidamo cusub. Mar labaad Gebze ee Istanbul HalkalıWaxaan dhamaystiri doonaa xariijimaha xaafadaha magaalada 2018. Laakiin waxaan rabnaa in aan tan Ankara u keenno. Waxaan leenahay iskaashi weyn oo lagu gaaro bari iyo koofurta Kocaeli, qaar ka mid ahna waxaa samayn doona degmada magaalomadaxda. Waxaan ku iibineynaa 400 Milyan TL ah oo ku saabsan dhammaan xiriiriyahan waxaanan sii wadi doonaa horumarinta ganacsigeenna. "
Isha: waxaan www.kocaelibarisgazetesi.co
Gebze-Halkalı xariiqa tareenka ee lagu dhammeeyo 2018
Rugta Ganacsiga ee Kocaeli
Kadir Topbas oo u socdaalaya Isgoydeed subway